Emergency chirevo chevashanyi muPeru kubva PROMPERU
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Emergency chirevo chevashanyi muPeru kubva PROMPERU
Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Peru Kuvhuna Nhau • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Mukupindura kudhirowa kwekurima kwakaziviswa muna Chivabvu 13, 2019 muCusco, PROMPERU yakaburitsa ruzivo runotevera:
Musi waMay 13, masevhisi eTrans-Andean - njanji njanji inoenda kuMachu Picchu - ichamiswa.
Nekuda kweizvi uye nekuchengetedza kwevafambi, iyo Peru Rail uye Inca Rail inotora zvese zviito kufambisa nzendo kudzokorora kana kudzorera matikiti ese akatengwa ezuva irori pasina muripo. Kuti uwane rumwe ruzivo uye rubatsiro maererano nechitima masevhisi, vafambi vanogona kufonera nhamba dzinotevera:
Inca Njanji: (+51 84) 581860
Machu Picchu ichavhurwa. Zvakadaro, vafambi vakatotenga matikiti ekupinda munzvimbo inoera Machu Picchu neMuvhuro, Chivabvu 13, uye vasingazokwanisi kusvika ikoko musi iwoyo, vangave nemukana wekuvashandura chero Svondo, Chivabvu 12, (zuva rakapfuura ) kana kusvika Chipiri, Chivabvu 14, (zuva rakatevera) pasina imwezve mari.
PROMPERU inoyeuchidza vafambi vese kuti hanya uye rubatsiro rwevashanyi venyika nevekunze [ve] iPeru rinowanikwa maawa makumi maviri nemana nekufona (+24 51) 1, neemail: [email inodzivirirwa] , kana kuburikidza neWhatsApp: 944492314 (meseji chete).